Wilfried Zaha Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast Wilfried Zaha Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara amara na aha njirimara; 'Crystal Home Boy'.
Ụdị anyị nke Wilfried Zaha's Biography Facts, gụnyere akụkọ nwata ya, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke akụkọ ihe mere eme ya site n'oge ọ bụ nwata. Anyị na-aga n'ihu ịgwa gị ka Crystal Palace Legend si nwee ihe ịga nke ọma.
Nyocha nke Wilfried Zaha's Bio gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama ama, eziokwu mmekọrịta, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ OFF-Pitch obere ihe amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole tụlee Wilfried Zaha's Biography nke bụ ihe na-akpali mmasị. Ugbu a, n'enweghi oge ọzọ, ka anyị malite.
Akụkọ Wilfried Zaha nke ụmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Dazet Wilfried Armel Zaha [Full Name] a mụrụ na 10th nke November 1992 na Abidjan, Côte d'Ivoire. Amuru ya dika Scorpio.
A mụrụ Wilfried nye Mr na Oriakụ Armel Zaha, onye si Côte d'Ivoire. Mgbe ọ dị afọ anọ, nne na nna ya nwetara ọganihu ego nke hụrụ ka ha na-ebuga ụmụ ha 8 na United Kingdom.
Little Zaha bụ nwa ikpeazụ mụrụ. Mgbe ezinụlọ ya kwagara, ha biri na Thornton Heath na mpaghara London nke Croydon.
Tupu ịkwaga Europe, a na-eji Little Wilfried eme egwuregwu football mgbe ọ nọ na obodo ya, Cote d'Ivoire.
Nwatakịrị ahụ gara n'ihu n'ụdị omume yiri ya na ụlọ akwụkwọ London ya nke dị nso na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Crystal Palace.
N'ezie, Zaha tolitere n'okporo ụzọ si Crystal Palace's Selhurst Park stadium, ebe nne na nna ya biri mgbe ọ kwagara England.
Ọ bụ mpaghara akpọrọ maka ọtụtụ ndị isi ojii nke na-akọwa ihe kpatara klọb ahụ ji amịkọrọ ọtụtụ ndị egwuregwu ojii.
Mgbe Wilfried dị afọ iri na ụma, ọ dịghị mgbe ọ na-ahapụ ikiri egwuregwu Chelsea na TV. Ọ maara ya ahụ Didier Drogba Onye bịara bido ihe mgbaru ọsọ Chelsea nke mbụ ya na Crystal Palace nke ọ gara.
Ịhụ ka onye obodo ibe ya na-achị achị na Premier League mere ka ọ nwee mmasị ọhụrụ. Wilfried hụrụ mmasị nke na-egosi nrọ ya ịghọ ọkachamara n'egwuregwu football.
Site na nkwado nke Nna ya Armel Zaha, Wilfried sonyeere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Crystal Palace mgbe ọ dị afọ 12. O mechara kpọọ oku agadi maka Palace na 2010, si otú a nyere ha aka ịlaghachi na Premier League.
Na Jenụwarị 2013, Wilfried zigara Manchester United maka ego mbụ nke £ 10 nde. N'ezie, ọ bụ Alex Fergusonnnyefe ikpeazụ tupu ezumike nká ya.
Zaha laghachiri na Palace n'August 2014 na oge mgbazinye oge, tupu ya agbakwunyere ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide na February 2015. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Wilfried Zaha David Moyes Nwa nwanyi:
Gwa eziokwu. Wilfried Zaha nwere nsogbu mmekọrịta. Na-amalite, anyị na-enye gị akụkọ banyere ebubo mbụ ebubo ebubo ya. Ọ dịghị ọzọ karịa David Moye si nwa, Lauren.
Dị ka WILFRIED ZAHA si kwuo: “Ndị mmadụ kwuru na mụ na ha dinara Lauren. Ahụtụbeghị m ya! ”.
David Moyes nwere iwe mgbe ọ bụla dị ka ihe osise nke ma Zaha na nwa ya nwanyị Lauren n'elu akwa ka a tọhapụrụ na ịntanetị.
Akwara na-egosi na ha abụọ zutere 'Ọtụtụ Azụ', ọrụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'ịntanetị. Ọzọkwa, Lauren na mberede ghọrọ ihe kpatara Wilfried Zaha hapụrụ Man United maka Crystal Palace na 2013 maka £ 15m.
N'ezie, ọnụnọ ya na Old Trafford gosipụtara enweghị obi ụtọ na asịrị na-eme n'etiti ya na Lauren Moyes. Lauren Moyes dị naanị afọ 19 n'oge ahụ.
Kemgbe ohichapụrụ akaụntụ Twitter ya n'ihi nkwupụta ọjọọ ahụ. N'okpuru ebe a ka ọ na-ele iwe dị ọkụ.
Oge mbụ ndị otu iji soro United gwuo egwu maka Zaha, ekele niile maka ntaramahụhụ sitere n'aka David Moyes bụ onye chere na ọ raara ya nye.
Otú ọ dị, Wilfried Zaha nọgidere na-agọnahụ nkwupụta ahụ dị ka ọ kpọrọ ya 'Akwukwo asusu nzuzu'.
N'agbanyeghị na o yiri ka okwu ahụ anwụọla, ndị mgbasa ozi ka na-awakpo ya. Oge a, ọ na-emetụta nwa ya nwoke nke o nwere site na ezigbo enyi nwanyị Ivorian mara mma, Lavena Valentino.
Ha abụọ zutere na Côte d'Ivoire mgbe Wilfried Zaha nọ na-achọ ịchụ nta nne mama nwa ya na Côte d'Ivoire.
A na-enyo Lavena Valentino ịbụ nne nke nwa Zaha. Na mwakpo ịkwa emo na soshal midia, ọ na-ekwu 'Nwa Wilfried Zaha dị ka ọ dị na ọ chọpụtara na David Moyes bụ nne nna ya.'
Nwa Wilfried Zaha kwuru na ya bụ David Moyes, nwa nwa.
Nwa Wilfried Zaha dị ezigbo mma ma dị obere na foto dị n'okpuru.
Wilfried Zaha Biography Eziokwu - Ihe Nlekọta:
Wilfried Zaha boro ebubo na ọ ghọgburu enyi nwanyị ya. N'oge a, o boro ebubo na ọ kpọrọ enyi nwanyị nke ndị ọzọ na-agba ọsọ. Ọ bụ nwata akwụkwọ aha ya bụ Paige Bannister.
Dị ka n'oge ederede, Paige nọ na njedebe ya na ogo nchịkwa azụmahịa na Mahadum Westminster.
A na-ese foto Zaha n'otu oge ka ya na nwa akwụkwọ Paige Bannister na-ahapụ ụlọ obibi ya na Wembley, bụ onye ewu ewu na ụlọ akwụkwọ nwere nnukwu ọganihu n'ihi mmekọrịta ya na Zaha.
N'ezie, Zaha maraworị na ya na nwoke na-agbachitere Wolves bụ Kortney Hause bụ onye nọchitere anya England na ọkwa n'okpuru 21.
Mgbe a gwara ya ọ sịrị .."Achọghị m ịma". Ha abụọ ejirila ọtụtụ ngwụsị izu na Morocco na Dubai. Paige agwala Zaha banyere mmekọrịta ya na Kortney, akụkọ na-egosi na ọ nwetaghị nku anya.
Otu enyi nke Paige kwuru, sị: Paige na-avelụrị ọ inụ n'eziokwu n'ihi na o nwere ụmụ nwoke a ma ama. Ọ bụ n'ezie maka ego ya.
Paige na enyi ya nwoke Kortney Hause anọkọla ọnụ nwa oge, mana ọ gwuru eziokwu ahụ bụ na Zaha bụ onye egwuregwu Premier League wee baa ọgaranya.
Obi abụọ adịghị ya, Zaha adawo na Paige n'ụzọ dị ukwuu. Ọ gwala ya na ọ ga-ahapụ enyi nwanyị ya nwanyị mana ọ siri ike n’oge ahụ.
Foto dị n'okpuru na-egosi Zaha na Paige na-ahapụ ụlọ obibi ụlọ akwụkwọ ya ọnụ. Zaha na-aga n'azụ Paige maka ezigbo ihe kpatara ị kwesịrị ịma.
Mgbe ọ na-eleta, Zaha na-emekarị ogige ntụrụndụ ya bụ 110,000 nwa Mercedes G-Wagon dị nso n'ụlọ nzukọ ndị na-amụrụ ihe na Wembley. N'okpuru ebe a bụ Paige ka ọ na-abanye n'ụgbọala Zaha mgbe ọ hapụrụ ụlọ obibi ya na ndị ịgba egwu.
Nakwa bulite foto dị ọkụ, Paige eweputara foto nke onyinye dị oke ọnụ ọ natara n'aka Zaha, gụnyere ndị nkuzi £ 1,500, akpa Given 3,000 Givenchy na akpa another 4,000 Louis Vuitton ọzọ.
Ezinaụlọ Wilfried Zaha:
Malite, anyị na-agakwuru nwanne ya nwoke nke okenye nke na-enwetakarị akwụkwọ akụkọ maka ihe ndị na-ezighị ezi. A maara Zeltor Herve Zaha AKA dị ka onye na-azụ òtù DSN.
Herve Zaha mara na ọ bụ 'General' na òtù ọjọọ n'azụ ọtụtụ mpụ ime ihe ike na London.
O kwuru na ya bụ onye ndu otu ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama akpọ DSN 'Ekwula ihe ọ bụla'.
Nke a bụ otu ndị omempụ ejirila ọrụ maka ịkwa mma, ịgba égbè na izu ohi n'ofe ndịda London kemgbe 2007.
Site n'enye aha Zeltor aha ya, Herve Zaha dere otu ihe na ibe Bebo na 2009:
“All gị aluminum gangsters nke ndi mmadu ndi ozo ama ama, ịmara onye ị bụ, nweta ezigbo. ọkwa agbanweela.
Ndị otu m na-arụ ọrụ ya. Don'tchọghị ịhụ ọnụma m, cos ọ bụrụ na ị mee, ahụ gị na-aga ngwa nju oyi ka ị zọọ oyi ”.
Ya DSN 'Ekwula ihe ọ bụla' Gang bu ụzọ merie akụkọ n’afọ 2007 mgbe ha na ndị otu na-asọrịta mpi lụrụ ọgụ kpụ ọkụ n’ọnụ n’ụlọ ahịa dị na Croydon.
Ndị òtù ahụ ji mma na ụsụ baseball n'ehihie. Nke a hapụrụ otu n'ime enyi enyi Zaha.
Enyi nwata Zaha gburu site na mmegide ndi agha.
Herve Zaha AKA Zeltor natara nkwenye ọnọdụ ọnwa 12 maka mmebi mpụ na July 2012 mgbe ọ tụpụrụ slab site na windo ụgbọ ala mgbe onye ọkwọ ụgbọ ala nọdụrụ na wiil ahụ.
E nyere ya iwu ịkwụ £ 280 maka ịkwụ ụgwọ na ụgwọ ụlọ ikpe. N'akụkụ nke ahụ, e jidere ya ma gbapụta ya ọtụtụ ugboro.
Enweghị aro ọ bụla na Wilfried nwa nwanne ya nwoke na ndị omempụ na-etinye aka. Wilfried Zaha emeela nke ọma izere agha niile nke agha mgbe ọ na-etolite.
Wilfried Zaha na-emesapụ aka nye nne na nna ya. Ọ zụtara nne ya, ụgbọ ala na nna ya ụlọ.
Dị ka o kwesịrị, ọ na-ekenye pasent iri nke ụgwọ ya maka ọdịmma nke ndị ọ hụrụ n'anya gụnyere ọrụ ebere.
Banyere ọrụ ebere, Zaha na-edozi ndị nọ ná mkpa mgbe niile (n'ụlọ na mba ofesi) ma na-akwụsi ike n'akụkụ ndị omempụ agbata obi ya bụ ndị na-achọ mgbe niile.
Zaha enyerela otutu ndi enyi ya na ndi enyi ya aka ka ha gbanwee akwukwo ohuru.
Ọ ga-esiri Wilfried Zaha ike toro na ụlọ ya na ụmụnne ya asatọ mgbe ọ bụ ọdụdụ nwa. Wilfried Zaha nwere ụmụnne nwoke anọ na ụmụnne nwanyị atọ.
Ọ na-ekwenye na nna ya ji nlezianya mee ihe ịga nke ọma. Dị ka onye ikpeazụ a mụrụ na nwa nke ụlọ ahụ, a na-echebe ya mgbe niile ka ọ ghara ịbanye n'òtù ọjọọ dị iche na nwanne ya nwoke, Herve Zaha onye akpọrọ enweghị nchịkwa.
N'ezie, ámá egwuregwu Crystal Palace (Selhurst Park) nke dị n'èzí ụlọ ya zọpụtara ya. N'okpuru ebe a bụ nkọwa nke ámá egwuregwu. Ikekwe, ị ga-eche n'echiche ebe ụlọ ezinụlọ Wilfried Zaha dị.
N'oge ọ bụ nwata, karịsịa mgbe ọ na-abịaru England nso mgbe ọ dị afọ 4, ezinụlọ ya ga-eche ihe na-eme mgbe ikpo ọkụ ahụ malitere maka egwuregwu abalị.
Wilfried Zaha Biography Eziokwu - Ego Ego:
A na-eche na ọ ga-emefu n'etiti £ 6,000 to £ 10,000 na ụlọ ịgba egwu abalị na ego na ebe eji ego. Ndị ozi niile kwenyere na ọ na-enweta ọgwụgwọ kpakpando maka ọrụ ya.
A na-ekwu na ebe dịpụrụ adịpụ n'ime ngalaba VIP nke ebe egwuregwu ahụ ga-abụ ndoputa na-adịgide adịgide maka Wilfried Zaha na ndị enyi na ezinụlọ.
Wilfried Zaha, nnukwu ego na-emefu na mmanya.
Ọbụna na nke a, Wilfried Zaha adịghị n'ógbè Balotelli mgbe ọ na-abịa na-emefu na Ogwe, ma ọ na-amụta ngwa ngwa.
Wilfried Zaha Biography Eziokwu - Gilmore Shorts:
Wilfried Zaha na-achọ ka afọ ojuju ya na uwe ime egwuregwu ya. O meela otu ihe nkwado iji bụrụ ihu (na nnukwu) nke Gilmore Compression Shorts.
Onye dọkịta na-akpọ Harley Street, nke aha ya bụ OJA Gilmore, bụ onye ọkachamara banyere mmerụ ahụ, na-eyi uwe “Nke ndị sayensị mere iji kwado iji kwado nkwado ukwu, akụkụ hamstring na adductor.”
Ị nwekwara ike ịchọpụta na o nwere ụdị atụmatụ dị iche iche nke na-enye kediegwu “Akwụkwọ Ọrịa” (ntụgharịwang“) Nkwado maka ngwugwu nwoke.
"M na-eyi Gilmore Nkwado Shorts ịzụ kwa ụbọchị dị ka akụkụ nke m mkpa kit akpa - ha bụ ndị pụrụ iche," Zaha kwuru.
Okpukpe Wilfried Zaha:
Zaha kwuru na ndị mụrụ ya ga-adọkpụrụ ya na chọọchị mgbe ọ bụ nwata.
Dị ka o kwesịrị, Wilfried Zaha na-akpọ asị na a ga-eme ya ka ọ gaa n'ụlọ ụka dịka nwatakịrị, ma ọ na-enwe obi ụtọ na ndị mụrụ ya mere ya n'ihi na ugbu a ọ na-ekpe ekpere mgbe niile.
Ọ naghị ekpe ekpere naanị n’oge nsogbu mgbe ọ chọrọ enyemaka kamakwa ọ dị mma. N'okwu ya…
"Ana m ekpe ekpere maka ihe niile n'ezie," o kwuru. "Echere m na ihe niile na-eme maka ihe kpatara ya, na ị ghaghị inwe mmetụta siri ike ka m wee nọgide na-ekpe ekpere ma na-ekpe ekpere. Ọ bụrụ na m na-esi na ihe ọjọọ mgbochi m maara na ọ ga-aka mma.
Otu uzo i si ekpe ekpere n’oge ihe ojoo, otu uzo i kwesiri ikpe ekpere n’oge ihe di mma.
N'ihi na o doro anya na n'oge oge ọjọọ ị na-arịọ Chineke maka nke a na nke ahụ na mgbe Ọ na-enye gị ngọzi ndị a ma ọ bụ ihe ọ bụla, ị na-echezọ ikpe ekpere. Ya mere, ana m ekpe ekpere site na ihe dị ka afọ asatọ, itoolu.
Mgbe ahụ afọ, ndị mụrụ m na-adọkpụrụ m gaa ụka ma mchọrọ ya ma ọ bụ na achọghị. Mana mgbe ahụ ọ bịara bụrụ usoro iwu ebe m na-ekpe ekpere oge niile ma na-aga n'ihu.
Mgbe iwe were m na m na-eteta n'ụtụtụ ụtụtụ Sọnde ma na-eji ejiji n'isi ụtụtụ ma gaa chọọchị, echere m: 'know maara gịnị? M n'ezie n'ime nke a. Ekwenyere m na Chineke '.
Na-enwe obi mgbawa:
Wilfried Zaha nwere mmechuihu nwoke a, Peter Beardsley.
Pita Beardsley, onye Newcastle na-akọ akụkọ ihe mere eme, bụ onye na-achọgharị na Geordie n'otu oge na-eme njem 600 mile na London iji lelee Zaha n'omume megide Birmingham. Naanị ya ịchọpụta na a kwụsịla ya.
Wilfried Zaha Biography - chinggbanwe Nkwenye:
Na 27 November 2016, Ivorian Football Federation kwadoro na Zaha zigara akwụkwọ ozi FIFA ka ọ gbanwee nkwado ya na mba England site na England na Ivory Coast.
Na nzaghachi maka mmepe a, Gareth Southgate gosipụtara na ọ ga-anwa ime ka Zaha gbanwee nkwanye ntụkwasị obi n'ihi ụdị klọb na-agbanwe agbanwe. O di nwute, England tufuru ya na Ivory Coast.
A kpọrọ Zaha na ndị agha Ivory Coast maka 2017 Africa Cup of Nations. Ọ na-eme ihe mbụ megide Sweden na enyi na enyi, na-edozi ya na oge, inye aka Giovanni SioIhe mgbaru ọsọ na mmeri 2-1.
Wilfried Zaha Ndụ Nke Onwe:
Wilfried Zaha bụ onye na-egwu egwu ma nwee àgwà ndị na-esonụ dị ka àgwà ya;
Wilfried Zaha ike: Ọ bụ onye amamihe, onye obi ike, onye nwere obi ụtọ, onye isi ike na ezi enyi.
Adịghị ike Wilfried Zaha: O nwere ike ịbụ onye nwere ntụkwasị obi, ekworo, nzuzo na ime ihe ike.
Ihe Wilfried Zaha nwere mmasị: Ọ na-enwe mmasị n'eziokwu, eziokwu, ịbụ ezi, ndị enyi ogologo oge, ịkwa njakịrị na nnukwu mmasị.
Ihe Wilfried Zaha achọghị: Ọ na-enweghị mmasị na-emeghị ihe n'eziokwu, na-ekpughe ihe nzuzo na ndị na-agafe agafe
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ akụkọ nwata Wilfried Zaha gbakwunyere eziokwu akụkọ ndụ.
Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi ka anyị na-ebuga gị Akụkọ ndụ ndị egwuregwu bọọlụ Ivory Coast. Ọ bụrụ na ịhụ ihe na -adịghị mma n'isiokwu a, biko tinye nkọwa gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!
Akara akwukwo nke Côte d'Ivoire